ဝေ့ဌာနီ ရင်သားကျန်းမာရေးစင်တာ - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.
Medical ServiceCenter & Clinicsဝေ့ဌာနီ ရင်သားကျန်းမာရေးစင်တာ
အစိုးရ ဦးဆောင်သော ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှုများကို အကောင် အထည်ဖော်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအမျိုးသားရေး ကင်ဆာဌာန စာရင်းများအရ လူ (5)ယောက်လျှင်တစ် ယောက်နှုန်းကင်ဆာ ရောဂါ ဖြင့်သေဆုံး လျက်ရှိနေပါသည်။ ဝေ့ဌာနီ ဆေးရုံသည် သက်ရှည် ကျန်းမားရေးအတွက် ကင်ဆာ ရောဂါ ကို ကုသရန် အထူး အရေး ကြီးကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်သည်နှင့် အမျှ အကာင်းဆုံး ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများနှင့် ကုသမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
ကင်ဆာခွဲစိတ် အထူးကုဆရာဝန်များသည် ရင်သားကင်ဆာ ၊သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ၊အူမကြီးကင်ဆာ ၊အသည်းကင်ဆာများကို ခွဲစိတ်ကုသပေးနေပါသည်။ အထူးရင်သားကင်ဆာ ခွဲစိတ် ကု ဆရာဝန်များသည် ခွဲစိတ်မှုများ ကုသမှုများ ကို အဖွဲ့ လိုက်စုပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုး ကုသမှုများကို 2010 ခုနှစ်မှစတင်၍ ကုသဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။ ကင်ဆာရောဂါ ကြောင့် ခံစားရသော နာကျင်မှုဝေဒနာ များကို လည်း သက်သာ အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ ကင်ဆာကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ များကို လည်းပြေလည်အောင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
Chemotherapy ကိုလည်း ဆေးရူံတက်စရာမလိုဘဲ ပြင်ပ လူနာ အနေဖြင့် သော် လည်းကောင်း ဆေးရုံတက်၍ အတွင်းလူနာ အဖြစ်သော်လည်းကောင်း လူနာ၏ အခြေအနေ အပေါ် မှုတည်၍ ကုသမှု ခံယူ နိုင်ပါသည်။ အခြားကုထုံး များ ဥပမာ ဓာတ်ရောင်ခြည် ကုထုံး ၊ အသည်း ကင်ဆာဆဲလ်များအတွက် TOCE, TACE, RFA တို့ ကဲသို့ သော အဆင့်မြင့် နောက်ဆုံးပေါ် ကုတုံး များကိုလည်း ဆောင်ရွက် ကုသပေးနေ ပါသည်။
နေ့စဉ် – နံနက် ၈နာရီ မှ ည ၈နာရီထိ
ရင်သားကျန်းမာရေးစင်တာ – ဝေ့ဌာနီဆေးရုံကြီး ၃ထပ်
ဖုန်း : 02-734 -0000 ext. 4500
DR. PREAWPUN RAWEENIPAPONG